Zavatra 12 Tsy maintsy ataonao aorian'ny fanoratana bilaogy iray
Lisitry ny fanentanana momba ny fampiroboroboana bilaogy
Sabotsy, Desambra 22, 2012 Douglas Karr
Nanoratra lahatsoratra antsipiriany momba ny fomba manatsara ny hafatrao amin'ny bilaogy manaraka. izany infographic avy amin'ny DivvyHQ, fampiharana kalandrie editorial tsy misy fiparitahana, mandeha amin'ny dingana sasany hampiroboroboana ny atiny aorian'ny namoahana anao.
Ny hany zavatra somary misalasala ahy dia ny fangatahana bilaogera hafa hampiroborobo ny atiny. Raha manoratra atiny lehibe ianao, bilaogera hafa dia zarao… Mahatsiaro ho tsy mahalala fomba aho raha manontany fotsiny. Mety hosoloiko ity zavatra ity amin'ny fampiroboroboana karama. Mampiasa ny StumbleUpon Ads, Outbrain, na rafitra hafa afaka mahazo ny atiny ho hitanao sy zaraina.
Tags: fampiroboroboana ny lahatsoratra bilaogyfampiroboroboana bilaogyhampiroborobo ny lahatsoratra bilaogyhampiroborobo ny lahatsoratry ny bilaoginao
17 Nov 2016 tamin'ny 10:40 PM
Misy fomba fanontana an'ity sary ity ve? Te hihazona azy mora ampiasaina aho rehefa mandefa lahatsoratra.
19 Nov 2016 tamin'ny 9:47 PM
Angamba fanontana fotsiny ny tena sary, avy eo CTRL-P hanonta! Nanao rohy aho hanokatra azy amin'ny varavarankely vaovao.